Qaab dhismeedka SharePoint 2016: Maxaa cusub ee horumarinta? - ITS Tech School
Qaab dhismeedka SharePoint 2016: Maxaa cusub ee horumarinta?
Maxaa Cusub ee Sharepoint 2016
Horumarinta Horumarinta - Dheecaan
Si fudud loo fahmi karo - Si fudud
Ammaanka Hagaajiyay - Badbaado
Sharepoint waa codsi elektaroonig ah oo ku lug leh Xafiiska Microsoft. Dhiibitaanka 2001, Sharepoint waxaa si weyn looga iibiyaa habka kaydinta iyo maareynta dokumenti, hase yeeshee sheyga ayaa si aad ah loo dabooli karo oo isticmaali kara istiraatiijiyaadka si caqligal ah u dhexeeya xiriirinta. Waa wax firfircoon oo laysku duubay si ay u soo kabsadaan dukumiintiyada baqshadda. Nidaamyada shaqo-qabadka la-shaqeeyaa waxay siinayaan dhismayaasha dhismayaasha iyo hagaajinta arjiga inay fahmaan qaab-dhismeedka maareynta xogta SharePoint by kobcinta macaamilka marmarka qaar. Qodobbada la horumariyay waa xog-ururinta xogta iyo maaraynta maaraynta maaraynta. Waxay fulisaa hababka maaraynta xogta ee ka baxsan sanduuqa si loo xakameeyo wareegga nolosha ee xogta.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo Sharepoint ah oo leh karti kala duwan:
Sharepoint Online waa qaybta ugu badan ee lagu xayeysiiyo Xafiiska Microsoft 365 bisha ama xubneha sanadlaha ah, weli waa la heli karaa iyo dibedda. Waxaa ku xaddidan qaabeynta xarun ee isku-duwidda isku-dubaridka, faylka martigelinta, iyo xaaladaha maaraynta iyo maareynta maareynta, oo si joogta ah u cusboonaysiinaya.
Halkan waxaa ah 4 sababaha kala duwan ee ururadu u doortaan SharePoint:
Waa awooda iyo walxuhu waa ballaaran yihiin
Iskudhin iyo firfircooni dhexdhexaad ah Xafiiska 365
Microsoft waxay si xoogan u dhigeysaa mustaqbalka SharePoint
Solutions-ka-ka-soo-saarka sida Bonzai Intranet kaliya hagaajinta SharePoint Intranet
Sharepoint 2016 waxaa la abuuray qaab horey iyo daruuri ugu horeysay, laba shay oo aduunka ku qaadaya duufaan.
Waxaa jira waxyaabo badan oo ku jira Sharepoint. Qeyb ka mid ah kuwa la ogaanayo ayaa lagu qeexay hoosta.
Barnaamijka sameynta ee Columns Indexed. Waxay ka saartaa xawaaraha shaqada iyo si buuxda u kala saarida xadka 5000.
Qaab-ka-gudubka Raadinta Qalabka oo bixiya liisas la isku daro iyo mawduucyo kala duwan oo ka socota Sharepoint Online iyo In-preface
Qorshaha xaddidan ee xarigga qarsoodiga ah ee la qarsoomi doono ayaa ka soo baxay 2GB ilaa 10GB. Bannaanka bay'ada Macluumaadka Mawduucyada waxaa lagu falanqeynayaa qaabka 2016.
Ku dar Khariidada - Macaamiisha Sharepoint 2016 waxay arki doontaa cusboonaysiinta loo yaqaan "Pack Packs" waxay soo socotaa habka ay u soo bandhigaan casriyeynta loo soo gudbiyey Sharepoint Xafiiska 365 dib-u-dhiska.
Nidaamka 2016 ee barnaamijkan wuxuu soo bandhigay shey kale, MinRole, oo isdhaafisa diritaanka, kor u qaadida fulinta iyo tayada aan laheyn, waxayna sahlaysaa kala duwanaanta beeraha. Maaddaama MinRole ay isku dayayso in ay isku daydo in ay hesho mid adag oo mid kasta oo ka mid ah maamulayaasha ay u muuqdaan inay adag yihiin, waxay si dabiici ah u soo noqotaa inay noqoto mid aad u sarreeya oo ka duwan tayada hore.
MinRole highlight. Iyadoo la adeegsanayo qalabkan cusub ee Sharepoint Server 2016, Maamulayaasha Beeraha ee Sharepoint waxay qeexi karaan qayb kasta oo server ah
SharePoint 2016 waxay gabi ahaanba ku saleysan tahay codebase aan la aqoonsan karin oo ka socda Office 365. Waxaa loo tixgeliyaa sida ugu xasiloon, adag iyo waliba hareeraheeda oo dhan isku dayday sheyga Microsoft kaas oo hadda loo adeegsaday malaayiin hore. Sida laga soo xigtay Microsoft, codsi isku mid ah ayaa looga baahan yahay in loo adeegsado wax kasta oo mustaqbalka ah ee SharePoint.
Iskudhiciika Sharepoint ee ugu dambeeyay wuxuu la socdaa interface-ku-taabasho taabasho ah. Tani waxay kor u qaadeysaa waayo-aragnimada isticmaalka telefoonka gacanta ama kaniiniga.
Hagaajinta UI-ga iyo soo-saaraha codsiga iyo in ay samayn doonaan sahaminta midkood SharePoint 2016 ama Xafiiska 365 wax kasta oo fudud.
Microsoft Flow - Shaqada Sharafta leh waa mid weli nool oo adag. Baahida maantu waxay si joogto ah u tahay tufaax, waxayna ka qaadan doontaa in ka badan kaliya SharePoint iyo socodka cusub si ay u xalliyaan kuwan.
SharePoint 2016's Hybrid OneDrive for Business wuxuu ku darayaa farshaxanka. Waxay u sahlaysaa shakhsiyaadka u baahan in si tartiib tartiib ah ay ula wareegaan maamulka daruuriga. Iyadoo Sharepoint ugu dambeeyey, macaamiishu waxay u wareejin kartaa goobahooda goobta My Sites / OneDrive martigelisay Sharepoint Online OneDrive for Business. Tani waxay siin doontaa xoriyadda inay ka faa'iideystaan ​​faylashadooda meel kasta.
Meelaha Kooxaha - Goobaha Kooxda SharePoint waxay helayaan cusboonaysiin, waxayna sidoo kale si caadi ah u sameyn doonaan a Xafiiska 365 Koox. Habka kale waa mid aad u wanaagsan, marka la samaynayo Xafiiska Group, waxay ku siin doontaa koox buuxda, hadda oo hadda ah.
Macaamiilku wuxuu sidoo kale ilaalin karaa sawirrada iyo cajaladaha la duubo isagoo ku dhajinaya maktabad dokumenti oo leh hal sax.
Halkii si sahlan loo beddeli lahaa, macaamiishii ugu dambeeyey ee Microsoft Sharepoint waxay u gudbin karaan dukumiintiyada ama macluumaadka ka mid ah OneDrive inay SharePoint ka qaadaan arrimaha la xiriira.
Waxay bixisaa nabadgelyo weyn oo loogu talagalay dhammaadka-macmiilka iyo maamulayaasha labadaba oo leh qaab aan caadi ahayn iyo dariiqa la xidhiidha. Waxay la socotaa awoodaha Maareynta Xuquuqda Macluumaadka (IRM) si loo hubiyo xogta adoo isku dayaya iyo xaqiijinta xogta maktabadaha Sharepoint ee OneDrive for Business.
In SSL 3.0, helitaan la'aan amniga ayaa la helay, taas oo u oggolaan karta barnaamijka in ay ku haboonaan macluumaadka. Si aad uga hortagto qoraallada ugu danbeeyay ee Sharepoint-ka hadda waa in la tirtiro ururka SSL 3.0 ururinta ururada sida koorsada, iyo xisaabaadka codsiyada qaarkood (tusaale ahaan RC4) oo leh arrimaha la yaqaan.
Iyada oo khadka SharePoint 2016 ku wareegsan tahay geeska, awoodda adag ee xoogga leh ee dhismaha dhismaha ee noocyadan aadka u sarreysa ayaa shaki la'aan u hirgeliyey inta badan maamulayaasha IT-da si ay u diyaarsadaan dib u-dejintooda soo socda.
Koorsada "Technology Innovative Solutions"
Ka hortagga danta khubarada aqoonta leh, wadista gaarsiinta TALEEFAHA ITS ayaa kiciyay shahaadada Shahaadada Sharepoint ee loogu talagalay dadka saan-qabadka ah ee sii kordhaya. Koorsadan dhamaystiran waxay daboolaysaa dhamaan qaybaha barnaamijka, waxayna kaa caawin doontaa fahamka inay ka shaqeeyaan arrimaha dhabta ah ee Sharepoint.
SharePoint Online Vs SharePoint On-dhismayaasha